Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga Yar ee Gobolka Washington (LIHEAP)
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Energy|Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga Hoose (LIHEAP)
Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga-hoose (LIHEAP)
LIHEAP waxay ka caawisaa tamarta muwaaddiniinta Washington iyada oo loo marayo shabakad ka socota hay'adaha waxqabadka bulshada iyo degmooyinka maxalliga ah. Ururradan waxay qabtaan go'aaminta u-qalmitaanka barnaamijka waxayna ku abaal mariyaan deeqaha LIHEAP qoysaska u-qalma. Hay'ad kastaa waxay leedahay hanaan u gaar ah oo u baahan in la raaco si ay u hesho adeegyada LIHEAP.
Si aad u codsato LIHEAP, waa inaad ballan la sameysatid hay'adda bixisa adeegyada deegaankaaga.
Halkan guji si aad u aragto khariidadda gobolka oo aad xulo degmada aad ku nooshahay. Waxaad ka heli doontaa macluumaadka xiriirka hay'adda ee deegaankaaga iyo tilmaamaha jadwalka ballanta LIHEAP.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Hubinta Hore iyo Jadwalka, kaas oo ku siin doona macluumaadka xiriirka ee degmadaada ama kuu oggolaan doona inaad ballan qabsato iyadoo kuxiran hay'adda gargaarka ee deegaankaaga.
FIIRO GAAR AH: Waaxda Ganacsiga waa wakaaladda gobolka ee maamusha barnaamijka LIHEAP ee Washington. Ganacsigu ma go'aaminayo u-qalmitaanka ama deeqaha abaalmarinta ee qoysaska.
Barnaamijka Caawinta Tamarta Guriga ee Dakhliga-hoose (LIHEAP) waa deeq lacageed oo ay maalgeliso dowladda dhexe oo ay maamusho Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha Mareykanka, Xafiiska Adeegyada Bulshada Barnaamijku wuxuu damacsan yahay inuu ka caawiyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo sidii ay u dabooli lahaayeen baahiyahooda tamarta guriga ee ugu dhow.
Gobolka Washington, LIHEAP waxay caawisaa qoysaska dakhligoodu ka hooseeyo ama ka hooseeyo boqolkiiba 150 heerka saboolnimada federaalka. Qoysaskan ayaa bixiya qayb aad u badan oo ka mid ah dakhligooda kuleylka guryahooda. Natiija ahaan, waxay halis ugu jiraan inay lumiyaan helitaanka kuleylka bilaha qabow. Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo qoysaskan inay sii kululaadaan, gaar ahaan qoysaska ugu nugul, sida waayeelka, naafada, iyo qoysaska leh carruurta yar yar.
LIHEAP waxay ugu horreyn caawisaa qoysaska iyadoo si toos ah uga codsanaysa deeqda tamarta bixiyaha tamarta iyadoo ka wakiil ah reerka u qalma. Xaaladaha qaarkood, LIHEAP sidoo kale waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta ama beddelka nidaamka kuleylka ee aan aaminka ahayn, aan shaqeyneyn, iyo / ama aan shaqeyn. Qoysaska u qalma LIHEAP sidoo kale waxay u qalmi karaan in guryahooda laga dhigo mid tamar badan ka hela barnaamijka Cimilada.
Naga caawi sidii aan u xoojin lahayn sharafta barnaamijka Washington State LIHEAP. Fadlan ku soo wargeli maamulayaasha Waaxda Ganacsiga LIHEAP musuqmaasuq la tuhunsan yahay adigoo soo wacaya 360-725-2857.
Xaq Ma U Leeyahay Inaan Dalbado LIHEAP?
Haddii aad ku nooshahay Gobolka Washington, reerkaagu ma helin deeqda LIHEAP inta lagu jiro sanadka barnaamijka socda (Oktoobar - Sebtember), qoyskaaguna wuxuu la kulmaa tilmaamaha dakhliga ee barnaamijka, markaa waad u-qalmi kartaa LIHEAP. Xadka dakhliga waxaa loo dejiyay 150% heerka saboolnimada federaalka (FPL) waxaana laga yaabaa inuu ku yaal meesha Tilmaamaha U-qalmitaanka (PDF) bogga. Macluumaadka u-qalmitaanka ee ku yaal boggan waa hage keliya. U-qalmitaanka waa in lagu go'aamiyaa iyada oo loo marayo bixiyahaaga LIHEAP ee deegaankaaga. Ka hel adeeg-bixiyaha aaggaaga bogga "Sida Loo Codsado", oo ballanta ballanta maanta.
Adeegyo noocee ah ayaa la heli karaa?
LIHEAP waxaa ugu horreyn loo adeegsadaa in lagu caawiyo qoysaska hal mar oo ah kuleylinta deeqda oo si toos ah loogu sameeyo bixiyaha tamarta. Xaaladaha qaarkood, barnaamijkeenu wuxuu kaloo kaa caawin karaa hagaajinta ama beddelka nidaamka kuleylka aan badbaadada lahayn, aan shaqeyneyn, iyo / ama aan shaqeynin.
LIHEAP ma barnaamijka keliya ee Gargaarka Tamarta?
LIHEAP kaliya maahan barnaamijka kaalmada tamarta ee laga helo Washington. Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha tamarta ee gobolka oo dhan waxay maamulaan barnaamijyadooda kaalmaynta tamarta iyo / ama waxay siiyaan qiimo dhimis qaas ah macaamiisha aqoonta u leh. Qaar ka mid ah barnaamijyadan waxaa loogu talagalay si aad ugu eg barnaamijka LIHEAP waxaana lagu bixiyaa isla hay'adaha bixiya barnaamijkaaga LIHEAP ee deegaankaaga.
Halkee ayaan ka codsadaa LIHEAP?
Si aad u codsato LIHEAP, waa inaad ballan ka qabsataa bixiyaha LIHEAP ee bulshadaada. Hay'ad kastaa waxay leedahay hanaan u gaar ah oo loogu talagalay jadwalka ballamaha. Waa inaad raacdaa nidaamka jadwalka u gaarka ah wakaalada deegaankaaga. Balan laguma sameyn karo Waaxda Ganacsiga. Waxaad ka heli doontaa bixiyaha LIHEAP aaggaaga bogga "Sida Loo Codsado".
Immisa jeer ayaan codsan karaa?
Waxaad codsankartaa oo keliya LIHEAP hal mar sanadkiiba. Sannadka barnaamijku wuxuu soconayaa Oktoobar 1 illaa Sebtember 30.
Ma Muhiim Tahay Meesha Il-kulkeedu Yahay?
Dhib malahan waxa isha kuleylkaagu yahay. Barnaamijkeenu wuxuu abaal mariyaa deeqaha kaalmada tamarta iyadoon loo eegin nooca shidaalka. Waxaan ka caawinaa qoysaska koronto, gaas, propane, saliid, dhuxul, iyo alwaax.
Ma u baahanahay inaan bixiyo dukumiinti?
Haa. Waxaad u baahan doontaa inaad keento dukumiinti si aad u hesho deeqda LIHEAP. Dukumiintiyada la codsaday way ku kala duwanaan karaan bixiyaha LIHEAP. Hubso inaad ogaato dukumiintiyada aad u baahan tahay kahor ballantaada jadwalka ah. Caadi ahaan, waxaa lagu weydiin doonaa inaad diiwaangeliso aqoonsigaaga, joogitaankaaga, kharashyada kuleylka, iyo dakhligaaga.
Immisa Lacag ah ayaan helayaa?
Qadarka lacagta la siiyay qoyskaaga waxay ku xirnaan doontaa arrimo badan. Guri walba cabirkiisa, daqligiisa, iyo kharashka kuleylka sanadlaha ah waxay saameyn ku yeelan doontaa qadarka deeqdooda LIHEAP. Waa inaad ballan LIHEAP ah la sameysid bixiyaha bulshadaada si loo ogaado inta aad heli karto.
Si Toos Ah Ma I Siin Doontaa?
Xaaladaha badankood, lacag toos ah ku siin mayno. Ikhtiyaariyada koowaad ee barnaamijkeenu waa inaan si toos ah u siino deeqaha LIHEAP bixiyaha tamarta. Xaaladaha qaarkood, deeqda LIHEAP waxaa si toos ah loogu siin karaa qoys halkii laga siin lahaa tamar-bixiyaha, laakiin taasi waa wax aan caadi ahayn.
Tilmaamaha U-Qalmitaanka LIHEAP (PDF)
Khariidadda Gobolka ee Codsiyada LIHEAP
COVID-19 Kheyraadka Caawinta Bixiye Gaas iyo Koronto
HHS LIHEAP Bogga Hoyga
Waraaqaha la xiriira
QORAALKA 2021 LIHEAP Qorshaha Gobolka (PDF)
Qorshaha Gobolka 2020 ee LIHEAP (PDF)
Qorshaha Gobolka 2019 ee LIHEAP (PDF)
Codsiga Ka-dhaafida Cimilada ee 2020 LIHEAP (PDF)
Foomka Codsiga Dhageysiga Cadaaladda ee LIHEAP (PDF)
PM-15-08R - Qeexitaanno Cimilo-xumo Lagu daray Qeexitaanno Caafimaad (PDF)
PM-16-02 - Qeexitaanno Cimilo-xumo Lagu daray Qeexitaanno Caafimaad (PDF)
PM-15-08R, Policy 5.8.3 - Cimilada cimilada + Caafimaadka Aasaasiga ah (PDF)
PM-16-02, Policy 5.8.4 - Weatherization Plus Health Enhanced (PDF)